Nafiisa Yuusuf: Shakhsiyad Calanka U Sidda Ololaha Xuquuqda Haweenka Ee Somaliland | Hayaan News
Nafiisa Yuusuf: Shakhsiyad Calanka U Sidda Ololaha Xuquuqda Haweenka Ee Somaliland
Hargeysa(Hayaannews): – Qofka booqda Nafiisa Yuusuf Maxamed, inta aanu gudahaba u gelin xafiiskeeda, wuxu si buuxda u fahmayaa fikradaha ay aaminsan tahay.
Waa hooyo 44 jir ah oo leh toddoba carruur ah, waxaanay safka hore kaga jirtaa dedaallada baadi-goobka xuquuqda haweenka ee Somaliland, waana shaqo ay caan ku tahay in ka badan toban sanno.
“Somaliland horumar ayay ka samaysay dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga sannadihii la soo dhaafay, laakiin weli fari kama qodna xuquuqda haweenka” Ayay tidhi Nafiisa oo lagu soo daabacay boggan: https://unsom.unmissions.org/so/nafiisa-yuusuf-maxamed-shakhsi-calanka-u-sidda-ololaha-xuquuqda-haweenka-ee-somaliland?fbclid=IwAR3bg8IsXp7qazgskoBEluvn7jTnAoekSuS7tppOdFY-CACoNL1kOwXOawY
Nafiisa hadda waa Agaasimaha Fulinta ee Nagaad oo ah dallad midaysa 46 ururrada haweenka ah oo ku baahsan Somailand. Waxay xilkan haysa tobbankii sanno ee u dambeeyey.
“Waxan ahay qofka ugu horreeya ee xafiiska yimaad uguna dambeeya rawaxaadda, maadaama ay i saaran yihiin masuuliyado ka badan inta shaqaalaha kale saaran. Sidoo kale, waxaan rabaa in aan noqdo tusaale ay shaqaaluhu ku daydaan” ayay tidhi Nafiisa iyadoo ka hadlaysay jadwalkeeda shaqada kaas oo bilaabma 7:00-da subaxnimo maalin walba.
“Waxa suurtagal ah in aan haweenku metelaad ku yeelan baarlamaanka Somaliland, taasina wax la aqbali karo maaha. Dumarka tiradoodu way ka baddan tahay 50% dadweynaha Somaliland, sidaa daraadeed waa in ay helaan xuquuqdooda siyaasadeed” ayay tidhi Nafiisa iyadoo raacisay in ciddii ugu badnayd ee u codaysay ragga maanta fadhiya baarlamaanku ay ahaayeen haweenka. Haweenku hadda hal xildhibaan ayay ku leeyihiin Golaha Wakiillada Somaliland oo ka kooban 82 xildhibaan.
25kii August 2020, xildhibaannada Golaha Wakiillada ee Somaliland waxay ansixiyeen xeer cusub oo loo yaqaan “Xeerka Kufsiga, Sinada iyo Xadgudubyada la Xidhiidha”. Ansixinta xeerkaa waxa si weyn loogu arkay dib-u-dhac ku yimi xuquuqdii haweenka.